IiPachís 🎲 Ngena, ukonwabele kwaye udlale kwi-Emulator
IParcheesi. Uthandwa zizizukulwana zabantu kwihlabathi liphela, Isikhumba ngumdlalo webhodi owonwabisayo kwaye ukonwabisa ngokulula kwawo. Masibone iMbali kunye nezinto ezibonisa umdla eParcheesi.
IParcheesi: indlela yokudlala inyathelo ngenyathelo 🙂
Yintoni iParcheesi? 🎲
Umdlalo weParcheesi ngumdlalo webhodi ongadingi kwaziswa. bucala ngasekhohlo umdlalo wesintu Ihlala ilukhetho olukhulu ukuzisa abantwana kunye nabantu abadala ekhaya okanye kwindawo engaphandle.
Iithayile azinakubuya umva, banokuqhubela phambili kwicala elichasene newotshi, kwaye ukungena kwindlu yokugqibela kufuneka uqengqe inani elichanekileyo elifunekayo.
Ukuba inani eliphumayo likhulu kunokuba liyimfuneko kwaye i-pawn ihambisa umnyango kwisikwere sokugqibela, Kuya kufuneka ujikeleze ibhodi elinye ixesha.
Abadlali bayatshintshana ukuhambisa idayisi.
Ukususa ikhadi ekhayeni lakhe okanye kwibhokisi yokuqala, umntu othabatha inxaxheba kufuneka ufumane inombolo yesi-5 (kwezinye iindawo inani u-6). Kude kube lelo xesha, kuya kufuneka uhlale kweso sikwere kwaye uqhubeke nokudlulisa ithuba lakho.
I-6 yiGrail eNgcwele yaseParcheesi, njengoko kunjalo ivumela isiqwenga ukuba siqhubele phambili izikwere ezi-6 kwaye siqengqe idayisi kwakhona.
Ukuba uqengqa ngedayisi zintandathu 6 zilandelelana, i-pawn yokugqibela yokuhamba iya kuba wohlwaywa ngokubuyela kwindawo yokuqala, indawo apho iipawundi zikhona ekuqaleni komdlalo.
KwiParcheesi, akukho ngaphezulu kwamaqhekeza ama-2 avunyelweyo ukuba angene kwisikwere esinye ebhodini.
Kwimeko apho kukho iziqwenga ezibini kwisikwere esinye, kuya kwenziwa "inqaba" okanye "isithintelo" uvimba indlela enqamlezileyo yeminye imibala.
Isithintelo sinokususwa kuphela ngumdali waso. Ukuba lo mdlali uqengqa i-6 ekufeni, uya kunyanzeliswa ukuba aqhekeze ubume bakhe, ahambise enye yeepawuthi kwinqaba.
Ukuba umntu uqengqa idayisi kwaye aphele efika kwindawo enye apho umhlobo sele ekhona, lo mhlobo unelishwa Kuya kufuneka ubuyele ekuqaleni. Le ntshukumo ibizwa ngokuba "yitya umchasi".
Imbali yeParcheesi 🤓
Imbali ithi umdlalo owawuza kuphakamisa iParcheesi wazalelwa eIndiya kudala kakhulu, embindini wenkulungwane ye-XNUMX.
Uyabizwa IPachisi , yayiqhele ukudlalwa kwezidumileyo Imiqolomba yaseAjanta , ibekwe kwimeko ye Maharashtra.
Ubume bayo bokuqala buvela emgangathweni nasezindongeni zemiqolomba, eyiyo isetyenziswe njengebhodi.
Umnqweno kukuba kanye kungenxa yobutyebi bemifanekiso eqingqiweyo kunye nemizobo emiqolombeni eqala kuyo Inkulungwane yesibini BCNamhlanje, esi sakhiwo senziwe ngemiqolomba engamashumi amathathu anesibini yindawo yeLifa leMveli ye-UNESCO. Kufuneka ubone indawo yabakhenkethi kuye nawuphina otyelele eIndiya
Enye into eyayibangela umdla, neyaphawulwa kumabali amadala, yayiyindlela "yokusebenzisana" encinci ngakumbi kunomlawuli waseIndiya UJalaluddin Muhammad Akbar qamba ukudlala iPachisi. Ngokusisiseko udale uhlobo oluphilayo lomdlalo, Ukutshintsha iziqwenga ebhodini kunye nabafazi abasuka kubafazi bakhe.
IParcheesi kunye namagama ayo ahlukeneyo
Njengoko yonke into elungileyo iphela ikhutshelwa, ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX, kunye nekoloniyali yaseBritane, UPachisi wathabatha amanyathelo okuqala phesheya.
Iikholoni ezazivela kubukhosi base-Bhritane zakhawuleza zazisa umdlalo e-UK, apho, emva kokuziqhelanisa okuthile, kwathiwa igama ngokusemthethweni nguLudo (isiLatini "somdlalo") kwaye ke unelungelo lobunikazi ngo-1896.
Yintoni eyaziwayo ukusukela ngoko ukuya phambili kukuba umdlalo "wemka" kwaye, ngexesha lohambo, I-Ludo kunye neenguqu zayo ziphumelele ukuthandwa kakhulu kumazwe amaninzi ehlabathi, phantsi kwamagama ahlukeneyo.
EJamani, umzekelo, uLudo ubizwa ngokuba "Musa ukuba nomsindo", Oko kuthetha into enje"Mfondini sukuphambana”, Kwaye inamagama alinganayo kwisiDatshi, isiSerbo -Croatia, isiBulgaria, isiCzech, iSlovak nesiPolish, apho yaziwa ngcono njenge Chinese ("Iitshayina e").
ESweden, idume njenge “Intlawulelo", Igama elithathwe kwigama lesiLatini fiat, elithetha"bayibenjalo".
Umahluko oqhelekileyo kwigama ngu "Fia-spel"(Fia umdlalo) kwaye"Fia med knuff”(Fia ngokutyhala). EDenmark naseNorway, ngokumangalisayo, kwagcinwa igama elithi Ludo.
EMntla Melika, ibizwa ngokuba yiSpain, Parcheesi. Kodwa kukwakho ukwahluka okwenziwe ziimpawu ezahlukeneyo, ezaziwa njenge Uxolo! noNgxaki.
Kwaye eSpain, sonke siyayazi njengeParcheesi.
Iminqweno yeParcheesi 🎲
Enkosi kwimithetho elula ekulula ukuyikhumbula, umdlalo weParcheesi ulungele yonke iminyaka, ukuba abantwana badlale kunye okanye nosapho luphela. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba abadlali aba-2 ukuya ku-4 badlale, kodwa sikwafumana iindidi ezidlalayo abadlali ababini okanye nangaphezulu. Kule meko, imibala yongezwa kwindawo esele ibomvu, luhlaza okwesibhakabhaka, tyheli kunye noluhlaza.
Kulungiselelwe abo baphumeleleyo ukungakhathali kulo mbuzo kwaye abazi kakuhle ukuba ungantoni, i IParcheesi ngumdlalo webhodi onokudlalwa ngabadlali aba-2, 3 okanye aba-4 (kule meko zinokwenza izibini).
Ibhodi yeParcheesi isikwere kwaye iphawulwe ngomnqamlezo, ngengalo nganye yomnqamlezo umbala owahlukileyo (ngesiqhelo bomvu, tyheli, luhlaza, noblowu).
Umdlali ngamnye kufuneka enze iziqwenga zakhe ezi-4, ezibizwa ngokuba "iipawundi"Okanye"amahashe", Gcwalisa umjikelo ebhodini uze ufike kwisikwere sokugqibela ngaphambi kwabanye.
Njenge? Ukudlala idayisi! Ewe kunjalo, iParcheesi ngumdlalo wethamsanqa, kodwa akukho mnandi kangako.
Imidlalo emibini eqhelekileyo
Ngokuqinisekileyo sele ubonile ukuba ukuguqula ibhodi kulo mdlalo kubandakanya ne Umdlalo weGoose. Kwakhona ukusuka emacaleni amabini, Kodwa uyilo olwahluke kancinane yiParchis y Gloria Game yethu. Iphefumlelwe ngamabali akudala afana no "Imbovane kunye nentethe"Okanye"Impungutye noNomyayi", Ivumela abantwana ngaphezulu kweminyaka emi-3 ukuba bonwabe ngemidlalo emibini. Iziqwenga zalo zimile okwehashe.